Akanakisa Masimbi Mazai ekugadzira & & Tsika Mataiti Mahombekiti vagadziri Alice
Vagadziri vanopa yakakwira-mhando Label's explates OEM Services
Aluminium Label Mabheji
Kumba > Nhau
Vatengi vanobva kuRebhanoni vakagadzirisa anopfuura zviuru gumi zvemota madiki emota Logos kuUS-Alice
Vatengi vanobva kuRebhanoni vakagadziridzwa anopfuura zviuru gumi zvemota madiki emota Logos kwatiri, uye kurongedza kwapera. Ndatenda nerutsigiro uye kuvimba kwako. Tinovimba kuti tinogona kushandira pamwe mune ramangwana, uye isu ticharamba tichipa vatengi nezvigadzirwa zvemhando yepamusoro.
Hutsi hweutsi hwakawanda sei? -Alice
Iyo nheyo yeutsi ndeyekuti kana utsi hunopinda musikeji uye rinokonzera iyo yemukati medu (ion mhando) kana iyo infrared inogamuchira chiratidzo (Photolectric mhando), chiratidzo che alarm chichaitika. Kana iyo detector yakafukidzwa uye utsi haugone kupinda, hazvizoonekwa. Utsi neguruva, hapana alarm ichaitika.
Chii chinokonzeresa maarini ekuputa kuti arambe achienda kure - Alice
Kuiswa kweshuwa kweutsi - Alice
Chigadzirwa Chigadzirwa: Utsi Hutsi hwakakamurwa muIon utsi Hutsi Hutsi, Fotolectric Sto Aarms, etc. Kubva kuSensors inoshandiswa.Ion utsi hwehuswa: Iyo inodomisa utsi alarm ine kamuri yeionization. Iyo yeiyo radioctive chinhu chinoshandiswa muIon Chamber, America 241 (am241), ine huwandu hweanenge 0.8 microcurie. Mumamiriro ezvinhu akajairwa, iri mumamiriro akaenzana emunda yemagetsi. Kana utsi neguruva pinda iyo Ionization Chamber hukama hukama hwakaparadzwa, uye dunhu redunhu rinoona kuti kusangana kunopfuura chikumbaridzo chakaiswa uye chinotuma alarm.
Hutsi hwehushe hwekushanda - Alice
Kubva pamisimboti yemukati, zvipuka zveutsi zvinoziva kudzivirira moto nekutarisa kusungwa kweutsi. Iyo ine radioce Source amerial amerium 241 mumakamuri emukati uye ekunze kweionization, uye izvo zvakanaka uye zvisina kunaka uye zvakashata zvinogadzirwa neIionization kuenda kune iyo yakanaka emagetsi uye yakaipa electrode zvichiteedzana nemunda wemagetsi munda wemagetsi. Mumamiriro ezvinhu akajairwa, iyo yazvino uye voltage yeiyo yemukati uye yekunze kamuri dzakasungirirwa. Kana utsi huchipukunyuka kunze kwekamuri yeionization. Kupindirana neyakajairika kufamba kwezvinhu zvakabhadharwa, vhoriyamu uye nekuparadza mwero pakati pemakamuri emukati uye saka wirelmitter yewaya isina waya chiratidzo yekuzivisa nzvimbo yekuzivisa uye kuendesa ruzivo rwelarm.
Utsi hweutsi hwave neRed Dots - Alice
Utsi hwehuswa hwakakosha michina yekuchengetedza mhuri. Kune dzimwe nhau dzakawanda dzinoshuma kuti hapana maarini eutsi mumba, uye utsi nemoto mumba hazvigone kuonwa panguva yekudzima moto, zvichikonzera kupiswa mumba. Mushure mekunge utsi hweutsi hwakaiswa, hwakaiswa ipapo. Kazhinji hapana kufamba. Kana paine mamiriro ezvinhu asina kujairika, utsi kana moto uchaonekwa.
Uripi utsi hweutsi hwekushandura - Alice
Utsi hweutsi hahugone kudzimwa zvakajairika. Senzira yekuchengetedza chengetedzo, haigone kudzimwa pamurume. Chete nekupwanya runyanga rwake, kana kugura zvakananga kubva pane simba rekuwanikwa
Zvinyorwa zvekushandiswa kweshuwa hweutsi hwehuswa - Alice
1. Iyo National Legislative Dhipatimendi inogona kuumba inoenderana mitemo yekumanikidza kuisirwa kweutsi hweutsi munzvimbo dzekugara; Uye zvakare, hurumende inotora chikamu mukugadzirisa mutengo weutsi hweutsi hwekuona uye hunopa marongero akakodzera ekurarama kuti mhuri dzive dzinogona kuvapa uye kuda kuvatenga.
Chii chinonzi utsi alarm? -Alice
Utsi Hutsi, anozivikanwawo semoto unoputa fourms, sensors sensors, etcal that kake, yakagadzirirwa bhatiri inoshandiswa seBackup Simba, uye iyo alarm yakagadzirira inogona kugadzirwa. Zviratidzo zvechiedza, izvo zvinonzi munhu akazvimirira utsi alarm.
Vatengi kubva kuNepal vakagadziridzwa zvinopfuura makumi mana emakumi mana vasina tsvina masimbi emabheji eUS-Alice
Ndedzipi nzira dzekunyepedzera yekushandisa iyo Wall worry-Alice
1. Mazhinji madziro emadziro ane basa ravo rekunyepedzera, saka vane zvakanyanyisa zvinodiwa pamhando yekapu yekukurudzira. Zvinokurudzirwa kuti iwe ushandise mukapu inosimudzira yakagadzirwa negironi yegironi. Panyaya yekudziya kwakanyanya, usadurura mvura inotonhora uye oiri madhiri mubhenji jira, kana zvikasadaro iyo blender Jar ichaputika nekuda kwekuwedzera.
Ndeupi musiyano uripo pakati pemadziro madziro uye nyama grinder - Alice
Iyo nyama grinder im muchina waishandiswa kunyumwa kugeda nyama. Inogona kuchera marudzi ese enyama mune yakamanikidzwa nyama kana kuti mune silika. Mbiri yemadziro iri muchina wekubika, izvo zvisingagone kuchema nyama, asi zvakare chikomba mukaka weSoy, muto, etc. Inogona kugedaya chikafu zvakanyanya uye kugadzirisa kuravira kwevanhu. Muridzi wemadziro anogona kutaurwa kuve shanduro yakakwidziridzwa yenyama grinder, iyo isingangoita mabasa mazhinji, asiwo anehungwaruwo.